Yona of the Dawn ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
Anime ချစ် ပရိသတ်တွေအတွက် Anime Series ကောင်းလေးတစ်ခုလောက် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဂျပန်လိုနာမည်လေးက Akatsuki no Yona လို့ အမည်ရပြီး English လိုကတော့ Yona of the Dawn လို့ အမည်ရပါတယ် …
Romance and Adventure ဇာတ်ကားအမျိုးအစား လေးဖြစ်ပါတယ် … အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့ လက်မလွှတ်သင့်ဘူးထင်မိပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးမပြောခင် ဇာတ်လမ်းလေးအဆုံးစာတန်းလေးတက်လာရင်လေ နောက်ပြမယ့် အပိုင်းအတွက် အစလေးတွေပျိုးပြီးပြပေးထားပါတယ် … ပိတ်မပစ်ဘဲ ကြည့်ပေးဖို့ အကြံပြုပေးပါရစေ …
ကဲ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးပြောပြမယ်နော် …
ခိုအုခတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကြင်နာတတ်တဲ့ ဘုရင်ကြီး အိုင်အယ် နဲ့ ယိုန လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ သမီးတော်လေး နေထိုင်တယ် …
မင်းသမီးမှာ ငယ်ငယ်လေးထဲကပေါင်းလာတဲ့ သူနဲ့သက်တူရွယ်တူ ဟက် လို့ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိတယ် … ပြီးတော့ မင်းသမီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူ့ရဲ့ဝမ်းကွဲအကို ဆူဝန်း တို့နဲ့တူတူနေထိုင်ကြတယ် …
ဒီလိုနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ဟက် က ယိုန ရဲ့ ကိုယ်ရံတော် အဖြစ်ရော , ခိုအုခတိုင်းပြည်ရဲ့ ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်အဖြစ်ရော တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် …
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဗိုလ်မှူးအဖြစ် တင်မြှောက်ခံရတာ ဟက် တစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ် … အဲ့တော့အရည်အချင်းကို မှန်းသာကြည့်တော့ပေါ့ …
အဲ့လိုနဲ့ တစ်နေ့ကျ ခိုအုခတိုင်းပြည်ကြီး အမှောင်ထုထဲရောက်ခဲ့ပါလေရဲ့ … အဲ့နေ့ကတော့ မင်းသမီးလေး အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ညမှာ သူမရဲ့ အဖေဘုရင်ကြီးကို သူချစ်ရတဲ့သူက သတ်ပစ်လိုက်တာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါပဲ …
မင်းသမီးယိုန နဲ့ ဟက် တို့ ထိုဒုက္ခတွေကနေ လွတ်မြောက်အောင် ပြေးခဲ့ကြရတယ် … လမ်းတစ်လျှောက် ဟက် မှာ မင်းသမီးကို ကာကွယ်ပုံလေးတွေက အရမ်းကို နှစ်သက်စရာလေးပါ …
အဲ့လို ပြေးရင်း မင်းသမီး နဲ့ ဟက် မှာ ဟက် ငယ်ဘဝကြီးပြင်းရာ လေမျိုးနွယ်စုကလန်ကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်း မင်းသမီးကိုလဲ ထိုနေရာမှာ လုံခြုံစွာထားခဲ့ဖို့ ဟက်တစ်ယောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ် …
မင်းသမီးကလဲ သူ့ကြောင့်အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရက်ဘဲ ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဟက်ရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူ အရင်စစ်သူကြီး ဟောင်းမန်ဒေါ့ နဲ့ တိုင်ပင်တယ် …
ထိုအချိန်မှာပင် မန်ဒေါ့ က သူလဲ မညွှန်ပြတတ်ဘူး … ညွှန်ပြတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးကိုရှာဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တယ် … ဘုန်းတော်ကြီးကိုရှာတွေ့ချိန်မှာ ခိုအုခတိုင်းပြည်ဖြစ်တည်လာပုံကိုအသေးစိတ်သိခဲ့ရပြီး … နဂါးသွေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ White , Green , Yellow , Blue ဆိုတဲ့ နဂါးစစ်သည်လေးဖော်ကိုရှာဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ် …
ထိုစစ်သည်လေးဖော်ကိုရှာဖွေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတဲ့ မင်းသမီးယိုန နဲ့ ဟက် တို့ရဲ့ လမ်းခရီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းပုံ , သာယာကြည်နူးရပုံ … ထိုသို့ရသအဖုံဖုံကို သေချာလေး ရိုက်ကူးထားပြီး …
မင်းသမီးရဲ့ နိုင်ငံကိုပြန်သိမ်းယူချင်တဲ့စိတ်က အောင်မြင်မှာလား ? နဂါးစစ်သည်လေးဖော်ကရော မင်းသမီးနဲ့ အလွယ်တကူပူးပေါင်းမှာလား ?? ဟက် နဲ့ ယိုန ကရော ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ ? ဆိုတာက်ိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်လိုက်တော့နော် …
အင်မတန်မှ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပါ … Anime Character လေးတွေကလဲ အချောလေးတွေပါ …
Rating အရ IMDb မှာ 8.1/10 နှင့် MyAnimeList မှာ 8.9/10 အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ Rating မြင့် ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ခုပါ …
OVA 1 : Openload OVA 1 : SolidDrive
OVA2: Openload OVA2: SolidDrive
OVA3: Openload OVA3: SolidDrive
Studio: Age Global Networks, AT-X, Docomo Anime Store, Hakusensha, Ltd., Marvelous AQL, Pierrot, Tokyo MX TV, Top-Insight International Co., VAP
Starring: Ai Kayano, Akira Ishida, Chiwa Saito, Hiro Shimono, Hisao Egawa, Jun'ichi Kanemaru, Junichi Suwabe, Junko Minagawa, Katsuhiko Sasaki, Kazuhiro Nakaya, Kazutomi Yamamoto, Kenn, Kokoro Kikuchi, Masaki Aizawa, Natsumi Takamori, Nobuhiko Okamoto, Susumu Akagi, Takayuki Sugo, Tomoaki Maeno, Yoshiko Sakakibara,
Trailer: Yona of the Dawn ( 2014 )